Android မှာ 7.0 Nougat ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Android မှာ 7.0 Nougat ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သိမ်မွေ့မျက်နှာပြင်အပြောင်းအလဲများ, တိုးတက်လာသောအကြောင်းကြားစာများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန် multitasking အပါအဝင်, Android အတွက်ရှေ့ဆက်နေတဲ့အစိုင်အခဲခြေလှမ်းအတွက်အောက်မှာကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှု mask
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Android မှာ 7.0 Nougat ပြန်လည်သုံးသပ်: ကြာကြာအသုံးခံတဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပိုမြန်စစ်ဆင်ရေး” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 22 သြဂုတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 17.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Android မှာ 7.0 Nougat Google ၏မိုဘိုင်း operating system ရဲ့ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်ပါသည်, ကမ္ဘာတဝှမ်း devices များဘီလီယံအသုံးပြုသော.
ဒါဟာကြာကြာအသုံးခံတဲ့ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထား, တိုးတက် multitasking နှင့်တစ်ဦးဆင်း slimmed နှင့်သန့်စင်ပြီးအန်းဒရွိုက်အတှေ့အကွုံရှိစမတ်အကြောင်းကြားစာများ - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်ပြုအလုပ်အပေါ်အောက်ပါ ဗားရှင်း6Marshmallow
ဒါဟာပိုမြန်, ပိုပြီးပွတ်ပြီးမသိမသာ-ပိုကောင်းအတှေ့အကွုံ All-ပတ်ပတ်လည်. App များပိုမိုလျင်မြန်စွာ install, OS ကို Android မှာအရွယ်အစားနှင့်မွမ်းမံမှုများအတွက်သေးငယ်ဖြစ်နိုင်ယင်ကောင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်, စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ 10 မိနစ်က reboots လုပ်သွားနေစဉ်, သင်တစ်ဦးစက်ပစ္စည်းအသစ်ရှိပါက. အသစ် Vulcan API ကိုဂရပ်ဖစ်စနစ်ကလည်းပိုကောင်းဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Nougat အဘို့၌ဖုတ်ဖြစ်ပါတယ် Google ရဲ့နေ့ခင်းအိပ်မက်ကို virtual အဖြစ်မှန် system ကိုထောကျပံ့မညျ, နောက်ဆုံးမှာ.
Nougat မဟုတ်ပါဘူး, သို့သော်, အန်းဒရွိုက်၏အဓိကအမြင်အာရုံစစ်ဆေးပြုပြင်တပ်ဆင်. အန်းဒရွိုက်မှပြုပြင်မွမ်းမံ၏လမ်းနည်းနည်းနှင့်အတူ Google ရဲ့ Nexus စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်မဆိုအပေါ် Marshmallow အသုံးပြုခဲ့ကြသောသူတို့သညျ, ထိုသို့သော OnePlus အဖြစ် 3, ချက်ချင်းကအသိအမှတျပွုပါမညျ.
ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုအမျိုးမျိုးသော Google က Nexus နဲ့ Pixel နဲ့ကိရိယာများပေါ်တွင်အပြေး Nougat တစ်ဦး Pre-လွှတ်ပေးရန် version ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သောအချို့သောသေးငယ်တဲ့အမှုအရာကိုယနေ့ဖြန့်ချိ Nougat ၏ထုတ်လုပ်မှုဗားရှင်းအပေါ်ကွဲပြားစေခြင်းငှါအဖြစ်.
Nougat အားလုံးနီးပါးဆက်သွယ်ရေး-based အသိပေးချက်များအတွက်အမြန်ဖြေကြားမှုများကို default စေသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အလုပျအများစုကိုနောက်ကွယ်မှအပေါ်သွားပြီဒါပေမဲ့ Nougat အတွက်တဦးတည်းသိသာပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအသိပေးချက်များရန်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကယခုမြှောက်နှင့်ကျယ်ပြန့်နေ, စမတ်ဖုန်းအပေါ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို width ကိုဖြည့်ဆည်း, အသီးအသီးအခြားသို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်, သော Marshmallow ရဲ့ကဒ်ကိုကဲ့သို့အသွင်အပြင်ထက်လျော့နည်းအာကာသ wastes. တူညီတဲ့ app ကိုမှအကွိမျမြားစှာအသိပေးချက်များကိုလည်းအတူတူပြွတ်, သောအကြောင်းကြားစာအရိပ်တက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ကပိုမိုလွယ်ကူတစ်တစ်ချက်မှာဘာအဘယ်အရာကိုမြင်ခြင်းနှင့် Mass en ပယ်ချဖို့စေသည်.
အသိပေးချက်များအတွက်အကြီးမားဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲ, သို့သော်, အမြန်အကြောင်းပြန် functions တွေထဲကကျယ်ပြန့်လိပ်သည်. ထိုကဲ့သို့သော Messenger ကိုနှင့် Hangouts ကိုအဖြစ် Google ရဲ့ apps များခဏတစ်များအတွက်အမြန်အကြောင်းပြန် features တွေရှိခဲ့ပေမယ့်ယခုအခြေခံအားဖြင့်တိုင်းဆက်သွယ်ရေး app ကိုအင်္ဂါရပ်ရှိသင့်.
အသုံးပြုသူများအကြောင်းကြားစာမှပြန်ကြားချက်ထိမှန်နှင့်အကြောင်းကြားစာအောက်မှာသေတ္တာသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ရဲ့သတင်းစကားကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်, သင်နောက်ဆုံးပြန်ကြားချက်ကတည်းက app ကိုဖွင့်လှစ်ကြပြီမဟုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းစကားလက်ဆုံ၏သမိုင်း၏သေးငယ်တဲ့အတိုအထွာပြပါလိမ့်မယ်အရာ.
ယခုအမြန် Toggle ၏ထိပ်တန်းအတန်းလည်းပါဝင်သည်ဆွဲချအသတိပေးချက်အရိပ်၏ပထမဦးဆုံးစင်မြင့်, သောထို့နောက်တပြင်လုံးကိုအများကြီးထုတ်ဖေါ်နောက်တဖန်ဖြိုဖျက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အသိပေးချက်များကိုအထက်လည်း Google ထိုကဲ့သို့သောကို Wi-Fi ကိုအဖြစ် features တွေကို toggling ဘို့ icon တွေကိုတစ်တန်းကိုထားတော်မူပြီ, ဘလူးတုသ်, မျက်နှာပြင်လည်ပတ်နှင့်အလားတူ, လျင်မြန်စွာအမြန် Toggle ၏အပြည့်အဝထားရန်ချဲ့ထွင်ခြင်းမရှိဘဲပုတ်ခံရနိုငျသော. ဒါဟာဖြင့် Wi-Fi ကိုပိတ်လိုက်ဖို့လိုအပျကိုပွတ်ဆွဲ၏အရေအတွက်ကိုလျော့နည်းစေ, ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ရိုးရှင်းခြင်းဖြင့်, ထောကျအကူပွုအသစ်များအပြင်.
သငျသညျရှိပုံပေါ်သောအရာကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်, အပြည့်အဝအမြန် Toggle pane ထဲက၏ထိပ်၌ဖွင့်အဘယျသို့ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်. လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနှင့်အတူထိပ်မှဆင်းဆွဲနေတုန်းပဲတဦးတည်းရွေ့လျားမှုအတွက်အပြည့်အဝအမြန် setting များကို pane ထဲကကိုတက်ဖွင့်လှစ်.
multi-window ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Android tablet များပိုမိုအသုံးဝင်ကိုဖြစ်စေရှုခင်းသို့မဟုတ်ပုံတူအတွက်သုံးနိုင်တယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
multi-window ကို, သို့မဟုတ် side-by-side အုပ်စုခွဲမျက်နှာပြင်ထောက်ခံမှု, သည်အခြားကြီးမားသောအသစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ထို့အပြင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်စေဖို့ကိုသုံးလမ်းရှိပါတယ်. Press နဲ့ screen ပေါ်မှာ app တစ်ခုတည်းနှင့်အတူဒါခေါ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ခလုတ်ကိုကိုင်ထား screen ပေါ်မှာတင်တဲ့ဒုတိယ app ကိုရွေးဖို့တစ် split-screen အမြင်အတွက်မကြာသေးမီကအသုံးပြု apps များစာရင်းအမှီ ပြု.. သင်တို့သည်လည်း taping နှင့်ကိုင်ပြီးစာရင်းထဲရှိ app များကိုတဦးနှင့်ရှုခင်းလျှင်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လက်ဝဲသို့မဟုတ် Right-လက်နှစ်ဖက်မှဆွဲအားဖြင့်မကြာသေးမီကအသုံးပြု apps များစာရင်းကနေလုပျနိုငျ, သင် list ကနေအခြား app ကိုကောက်ဖို့ခွင့်ပြု.
ထိုစနစ် UI ကိုဖမ်းစက်များတွင် activated တစ်ဦးက hidden နည်းလမ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ခလုတ်ကိုမှမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့်အလုပ်ဖြစ်တယ်.
ပြီးတာနဲ့ split-screen mode မှာ, Nougat Windows နဲ့ iOS ကိုမှအလားတူပြုမူ. အသုံးပြုသူများအုပ်စုခွဲ၏အရွယ်အစားကိုပြောင်းမှအလယ်တန်းအတွက်အနက်ရောင် bar ကိုဆွဲနိုင်, သို့မဟုတ်လုံးဝမပြုလုပ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ. ထိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် button ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုင်, သောအခါ, တက်ကြွနှစ်ခုရှက်အဖြစ်ပြသထားတယ်, လွန်း Multi-window ကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်.
စမတ်ဖုန်းအပေါ် portrait Multi-window ကို mode ကိုအလွန်အသုံးဝင်သည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့ရှုခင်း split-screen ပိုကြီးကိရိယာများပေါ်တွင်အသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဒါဟာတကယ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, နီးပါးတိုင်းပလီကေးရှင်းကထောက်ပံ့နှင့်အတူ. app များကိုသာတစ်ဦးအလွန်သေးငယ်တဲ့လူနည်းစုတက်ကြွစွာကပိတ်ဆို့, အဲဒီ Multi-window ကိုထောကျပံ့ဖို့မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်၌ updated စေခြင်းငှါ.
ဒါဟာအန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်များအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့ပွီသင့်ကြောင်းတစ်အင်္ဂါရပ်နှင့်အလုပ်စက်တွေအဖြစ်သူတို့ကိုပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်. ဒါဟာစမတ်ဖုန်းများအတွက်လျော့နည်းအသုံးဝင်သောင်, ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင် phablet အပေါ်ရှုခင်း Multi-window ကိုသငျသညျကိုတစ်ပြိုင်နက်အရာနှစ်ခုပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာအခြေအနေများအတွက်အသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်, ထိုကဲ့သို့သောမြေပုံနှင့်တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုအဖြစ်.
လတ်တလော app ကိုပြောင်းရန်နှစ်ချက်ကိုထိပုတ်ပါခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ထိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် button ကိုလည်းပြီးခဲ့သည့်-အသုံးအများဆုံး app ကိုမှဖြောင့်ကိုပြောင်းလိမ့်မည်ကို Double-ပုတ်, အရာတွေအများကြီးပိုမြန်နှစ်ဦး apps များအကြားလမ်းညွှန်စေသည်. apps များအကြား Copy ကူးစာသားကိုသို့မဟုတ်လင့်များယခုလျင်မြန်စွာဖြစ်ပါသည်. အခြား devices များ, အ OnePlus အပါအဝင်3ခဏတစ်ဘို့ဤအင်္ဂါရပ်ခဲ့ကြ, ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုက Android သို့ဖုတ်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်.
ကြာကြာအသုံးခံတဲ့ဘက်ထရီ Doze မှကျေးဇူးတင်စကား 2.0
အန်းဒရွိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံး-bits တစ်ခုမှာ 6.0 Marshmallow Doze ၏နိဒါန်းခဲ့သည်, ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုပြောင်းရွှေ့မခံခဲ့ရသည့်အခါဘက်ထရီကိုကယ်တင်ကူညီပေးခဲ့တယ်တဲ့အင်္ဂါရပ်, ထိုကဲ့သို့သောစားပွဲခုံပေါ်တင်လိုက်တယ်ခံအဖြစ်. ဒါဟာ standby ဘက်ထရီသက်တမ်းတစ်ဦးကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖန်ဆင်း.
Android မှာ 7.0 Nougat ဖုန်းလည်းရွေ့လျားသောအခါမှတူညီဘက်ထရီ-တိုးချဲ့ features တွေကိုသက်ဆိုင်. မျက်နှာပြင်ကိုချွတ်ဖြစ်တဲ့အခါ, Nougat နှင့်အချက်အလက်ရယူမနိုင်နိုင်ရာပေါ်အများကြီးတင်းကျပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်, ဘယ်လောက်မကြာခဏနှင့်မည်သို့မကြာခဏကဖုန်းကိုနှိုး. အဆိုပါရလဒ်အကြားဖြစ်ပါသည် 15 နှင့် 20% တစ်ဦးကို Nexus 6P ပေါ်မှာငါ့စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ကြာကြာဘက်ထရီသက်တမ်း.
Nougat Android ရဲ့စမတ်သော့ feature ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်, သိသိသာသာပိုမြန်ပြီးပိုတိကျမှန်ကန်ကိုက်ညီမကျြနှာကိုအောင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Google ရဲ့စမတ်သော့ခတ် features တွေကိုခဏပတ်ပတ်လည်ပြီ. သူတို့က screen ကိုသော့ခတ်ပိတ်ထားရန်လာသောအခါသိရန်အာရုံခံကိရိယာပေါင်းစပ်အသုံးပြုလာသောအခါပတ်စ်ကုတ်အမြဲလိုအပ်ပါသည်သေချာစေရန်.
facial အသိအမှတ်ပြုမှုခဏရရှိနိုင်ခဲ့, ဒါပေမယ့်ယုံကြည်စိတ်ချမျက်နှာစနစ်ကသိသိသာသာကို Android ကတည်းကတိုးတက်ခဲ့သည် 6.0 Marshmallow, တစ်လက်ဗွေစကင်နာမပါဘဲ tablet များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သောအရာဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦး Pixel ကို C အသုံးပြုခြင်း, အဲဒီအကြောင်း device ကိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အခါစနစ်ထူးဆန်းအခါသမယအတွက်အနည်းငယ်အသုံးဝင်သောထံမှထွက်သွား 80% ထိုအချိန်ကာလ၏.
တကယ်တော့, ငါနေကာမျက်မှန်နှင့်အလွန်အမင်းကြီးမားနားကြပ်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့သည့်အခါကငါ့မျက်နှာကိုအသိအမှတ်ပြုရန်မ onlytimes ခဲ့ကြ.
ယေဘုယျအားအန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat တို့သည်ကြီးစွာသော update ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာကြာကြာအသုံးခံတဲ့ဘက်ထရီအပါအဝင်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးကြောင်းပါးပျဉ်းအောက်တွင်အချို့သောသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုစေသည်. အဆိုပါအမြင်အာရုံ tweaks သိမ်မွေ့ဖြစ်ကြပြီးအများဆုံးဖွယ်ရှိ Third-party ထုတ်လုပ်သူများက Android ကိုမှဖန်ဆင်း customisible အားဖြင့်ရှာဖွေ Install လုပ်နိင်ပါလိမ့်မည်.
သူတို့က start ကနေရှိခဲ့ပွီသင့်တယ်နဲ့တူအသိပေးချက်များအလျင်မြန်-ပြန်ကြားချက်ဖြည့်စွက်ခံစားရ. သို့သော်ဖြစ်ကောင်းအားလုံးထုတ်လုပ်သူယခုချမှတ်သင့်ကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးသေးငယ်တဲ့ Tweak နှစ်ဆ-ကိုအသာပုတ်မှလျင်မြန်စွာပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဦးအသုံးအများဆုံး app တွေအကြားကိုခုန်ဖို့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် button ကိုစွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်ပိုမြန်တဲ့ menu ကိုမှလမ်းညွှန်ထက်ပြန်ဖွင့်, နှင့်စေဖို့ကိုမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမ Dexter ကြာ.
အရာတစ်ခုမှာအချို့ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော် - သင်က Android Marshmallow မကြိုက်ကြဘူးလျှင်, Nougat သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာမှလုပ်ဖို့မသွားဖြစ်ပါတယ်.
Google ရဲ့ Nexus ထုတ်ကုန်, က Nexus အပါအဝင် 6, 5X ကို, 6: P,9နဲ့ Nexus Player ကို, အဖြစ်ကောင်းစွာကို Google Pixel ကို C တက်ဘလက်အဖြစ်, ယနေ့စတင် Over-the-air update ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. အဆိုပါ LG က V20 မကြာမီကြောင့်လွှတ်ပေးရန် Nougat နှင့်အတူဖွင့်ဖို့ကိုပထမဦးဆုံးအသစ်စမတ်ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည်.
38410	5 အက္ခရာ, Android မှာ, အပိုဒ်, Google က, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, Software များ, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ
← သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုသင်ကစဉ်းစားပါသကဲ့သို့တိကျမှန်ကန်သောဖြစ်ပါသည်? Samsung ၏ Galaxy Note ကို7ဆန်းစစ်ခြင်း →